Imbali kunye neNkcubeko Imbali yamandulo kunye neNkcubeko
Isingeniso eBhabhiloni kunye neMithetho yoMthetho weHammurabi
IBhabhiloni (ngokumalunga nelo xesha, i-Iraq yangasemzantsi ye-Iraq) ligama lakwaMesophotamiya wasendulo elaziwa ngokuba yizibalo kunye nesayensi yeenkwenkwezi, izakhiwo, iincwadi, izicwangciso ze-cuneiform, imithetho kunye nokuphathwa, nobuhle, kunye nokugqithisa nokungendawo kwiBhayibhile.
Ukususela kwimimandla yaseMesopotamiya kufuphi nalapho iMigrisi ne-Ewufrathe imila e- Persian Gulf yayinamaqela amabini aphezulu, amaSumeriya kunye nama-Akkadi, idla ngokuba yiSumer-Akkad.
Njengengxenye yomzekelo ongapheliyo, abanye abantu baqhubeka bezama ukulawula umhlaba, izibonelelo zamaminerali kunye neendlela zokurhweba.
Ekugqibeleni, baphumelela. Ama-Amori ama-Amori avela kwi-Peninsula yase-Arabia alawula ukulawula amaninzi aseMesopotamiya malunga ne-1900 BC. Baye basekela ulawulo lwabo lwama-monarchical phezu kwimizi-dolophu nje kumntla we-Sumer, eBhabhiloni, ngaphambili eyayingu-Akkad (Agade). Amakhulu amathathu eminyaka yolawulo lwawo lwaziwa njengexesha elidala laseBhabhiloni.
AmaBhabhiloni ayekholelwa ukuba ukumkani unamandla ngenxa yoothixo; Ngapha koko, bacinga ukuba ukumkani wabo unkulunkulu. Ukwandisa amandla kunye nokulawula kwakhe, urhulumente woburhulumente kunye nolawulo oluseburhulumenteni basungulwa kunye nezilungiso ezingenakupheka, irhafu, kunye nenkonzo yempi engafunekiyo.
AmaSomeri ayesele anemithetho, kodwa alawulwa ngokubambisana ngabanye kunye nelizwe. Ngumlawuli ovela kuThixo weza imithetho ephefumlelwe nguThixo, ukuphulwa kwelokuba kwakukho umthetho kummandla kunye noothixo.
Inkosi yaseBhabhiloni (1728-1686 BC) UHammurabi uququzelele imithetho apho (ngokungafaniyo neSomerian) urhulumente angazitshutshisa egameni lakhe. Ikhowudi yeHammurabi idume ngokufuna isijeziso ukuze ilungele ulwaphulo-mthetho (i- lex talionis , okanye iliso ngeliso) kunye neyeza ezahlukeneyo kwiklasi yentlalo nganye.
Ikhowudi icingelwa ukuba yiSomeriya emoyeni kodwa ibuhlungu obuphefumlelweyo baseBabiloni.
UHammurabi wahlanganisana namaAsiriya ngasenyakatho kunye nama-Akkadians kunye namaSumeriya ngasentla. Ukurhweba kunye neAnatolia, iSiriya kunye nePalestine kwandiselela impembelelo yaseBhabhiloni. Wandisa kwakhona ubukhosi bakhe baseMesopotamiya ngokwakha inethiwekhi yezendlela kunye ne-post system.
Ngokwenkolo, kwakungekho utshintsho olukhulu oluvela kwi-Sumer / Akkad eBhabhiloni. UHambibi wongezelela iBhabhiloni uMarduk , njengonkulunkulu oyintloko, kwi-Sumerian pantheon. I- epic yeGilgamesh yiqoqo yaseBabiloni yeendaba zeSumeriya malunga nenkosi eyingqungquthela yedolophu-dolophu yase- Uruk , ngebali lembali.
Xa, ekubuseni kwindodana kaHammurabi, abahlaseli behashe ababizwa ngokuba ngamaKassites, benza i-incursions kwintsimi yaseBhabhiloni, abaseBhabhiloni babecinga isijezelo koothixo, kodwa bakwazi ukubuyela kwaye bahlala (amandla athile) kude kube Ngekhulu lama-16 BC xa amaHeti atyhiyibhile eBhabheli, kuphela ukurhoxisa kamva kuba loo mzi wawukude kakhulu kwiinkunzi zawo. Ekugqibeleni, amaAsiriya ayabakhubaza, kodwa nangona kwakungesiye isiphelo sabaseBhabhiloni ngenxa yokuba bavuka kwakhona kumaKaledi (okanye i-Neo-Babylonian era) ukususela ngo-612-539 badunyiswa nguFaro omkhulu, uNebhukadenetsare .
Ikhalenda ya mandulo
Isingeniso kwiNdala yamandulo (iMbali)
Ubukhulu bePersia yakudala
Bayabaphi AbakwaParthi Emlandweni Wasendulo?
Indlela yokulinganisa uMqulu kunye noxinano - iTale of Archimedes
13 Ulibaleka uJames Joyce Quotes
I-Hydrofluoric Acid - Ukuphuka Okubi
Amazwi amancinci angama-8 aqhelekileyo ngesiNgesi ngegrama
Ukholo lukaDkt Martin Luther King, uJr.
Imfazwe Yehlabathi II: Ukuhlaselwa kweBresden
Çatalhöyük: Ubomi eTurkey iminyaka eyi-9,000 Ago
USaint Efrem waseSiriya, iDekoni kunye noDokotela weCawa